Ma xamili kartaa eey awood badan oo lagu magacaabo Bully Kutta? - Taranka
Ma xamili kartaa eey awood badan oo lagu magacaabo Bully Kutta?
Bully Kutta waa a Rafaa , laakiin waa ka fog jilicsan .
Sidoo kale loo yaqaan Bakistaan , Hindi ah , aan fiicnayn , ama Sindhi Mastiff , 'Bahalka ka imanaya bariga' yahay dabiici ahaan dagaal badan iyo marka laga reebo xoog badan . Eygan shaqeeya wuxuu u baahan yahay maarayn khabiir iyo maahan mid kufiican qofkasta .
Ma haysaa waxa ay u baahan tahay si aad uhesho bakoorad caajis ah? Sii wad akhriska haddii aad u taagan tahay caqabadda.
Xaggay ka timid Bully Kutta?
Sidee buu Bully Kutta u eg yahay?
Sidee buu dagaal badan yahay Bully Kutta?
Sideed u daryeeshaa eeygaas xoogga badan?
Sidee caafimaad u yahay Bully Kutta?
Bully Kutta runti ma dhibbaa in la helo?
Bully Kutta ma kuu saxantahay adiga?
Asalka Sindhi Mastiff waa wax yar oo qarsoodi ah. Waan ognahay in noocani uu ka soo jeedo Gobollada Punjab iyo Sindh ee dalka Pakistan , oo taariikhda dib ugu yaraan ilaa qarnigii 16aad , laakiin inta hartay dood baa laga qabaa.
Aragtiyada qaar waxay soo jeedinayaan in markii Ingriiskii Weyn duulaanka ku qaaday Hindiya 1700-yadii, Mastiffadii Ingriiska ee ay askartu keeneen ay la dhasheen Mastiffs Hindi ah, taasoo keentay wixii loo yaqaanay Bully Kutta.
Qaar kale waxay yiraahdaan eeygan cabsida lihi waa farac toos ah oo ka mid ah qadiim ah Alaunt . Muddo dheer tan iyo markii uu dabar go'ay, Alaunts waxay ahaayeen nooc dhulleed la safra oo ilaaliya qabiilka reer guuraaga ah ee Alan ee hadda ah Iran.
Noocan ayaa markii hore ahaa ku barbaaray inuu la dagaallamo xayawaanka waaweyn sida ugaadha duurka iyo orsada. Maanta, Bully Kutta waa gaar caan ka ah Pakistan dagaalka sharci darada ah ee ey .
Waxaa laga yaabaa inaad isweydiiso haddii macno ka dambeeyo magacan Mastiff ah. Rumayso ama ha rumaysan, magacgan doggo ee adagi shaqo kuma laha inuu yahay xoogsheegasho macnaheedu yahay.
'Bully' waa nooc ka mid ah ereyada Punjabi oo xagjirka ah bholi , oo macnaheedu yahay 'duuduuban oo duuduuban.' Kutta macnaheedu waa 'eey.'
Dad badana ma yaqaanaan macluumaadkan, laakiin noocani wuxuu leeyahay noocyo ku kala duwan gobol ilaa gobol. Kuwani waa qaar ka mid ah nooca caanka ah ee Bully Kutta:
Nooc qadiim ah Bully Kutta
Bully Kutta Casri ah
Nooca Mastiff-ka ah Bully Kutta
Mastiff Bakistaan ​​waa eey u eg-cajiib ah . Waxay noqon kartaa tan ugu caansan ee loogu talagalay laalaabka maqaarka dabacsan qoorta iyo daanka (halkan magaceeda), taas oo ah ilaalin ahaan ilaalinta noocyada.
Sida ay sheegeen heerka caadiga ah , waxay leeyihiin ballaaran , madaxyo kaydsan iyo jirka muruqyada .
Bulldog Kutta waxay yeelan kartaa indho jaalle ah iyo san cas, laakiin waa dhif iyo naadir. Waxay leeyihiin dhego kacsan, oo badanaa la jaro.
Marka laga hadlayo xayawaanka la rabaayo, miyaad ku dhibsaneysaa inaad hoos u dhigto? Waxaa laga yaabaa inaad ogaatay in Bully Kuttas ay leedahay faruuryo dhaadheer oo dhaadheer .
Haddii aad xiiseyneyso inaad mid hesho, filo qadar hufan .
Badanaa way cad yihiin dhogor gaaban, siman, laakiin isku dhafka midabada kale waa suurtagal, sidoo kale. Kuwaas waxaa ka mid ah caddaan iyo madow, caddaan iyo bunni, madow, guduud, birimageed, fawn, iyo harlequin.
Immisa ayey leeyihiin eydaasi?
Iyagu uguma yeedhaan 'Bahal ka yimid Bariga' sabab la'aan - Bully Kutta waa weyn .
Ragga ayaa is miisaan kara 150-170 rodol (68-77 kg) waana inuu u dhexeeyaa 30-44 inji joog ahaan (76-112 cm). Dumarku aad uma yara, culeyskooduna waa ilaa 150 rodol (68 kg) iyo cabirka ilaa 36 inji (91 cm) dheer Fiiri fiidiyowgaan si aad u aragto sida ay u weyn yihiin Mastiffs-ka Hindiya!
Cabirkooda iyo dareenkooda eyga shaqeynaya darteed, Alangu Mastiff wuxuu u baahan yahay qol badan si uu u kala bixiyo lugaha dhaadheer. Kaliya tixgeli tarankaan haddii aad leedahay deyr weyn, deyr leh meesha eygaagu ku ordi karo oo xoogaa xoog ah ku sii deyn karo.
Ku sifeynta caqli iyo feejignaan, Bully Kutta waa a xukuma Eyga ay tahay oo kaliya in ay wax ka qabtaan kuwa khibradda u leh waayeelka waaweyn, weyn, iyo xitaa kuwa dagaalka badan.
Waxaan ku celinaynaa: eeygan laguma talinayo milkiilayaasha eyda cusub.
Sababta oo ah waxay yihiin loogu talagalay in lagu ilaaliyo lafteeda iyo xirmadeeda wax kasta oo ay ku kacayso, Mastiffs Indian noqon kara mid dagaal badan shisheeyaha iyo xayawaanka kale. Isdhexgalka hore ee bulshada ayaa fure u ah halkan. Haddii aad horey ugu haysatay xayawaan guriga jooga, tixgeli inaad hesho Ey Bully Kutta ah, si ay ugu fududaato inuu fahmo in wax walba aysan khatar aheyn.
Tani waxay u socotaa is dhexgalka bulshadaada, sidoo kale. Waa inaad u soo bandhigtaa Xoogsheegtadaada Pakistani kuwa booqdayaasha caadiga ah. Iyadoo kulamada caadiga ah , xayawaankaaga ayaa heli kara qof walba ku bartay shuruudaha saaxiibtinimo .
Taas markii la yidhi, eeyahaani waa ugu habboon guryaha aan carruurta lahayn . Eeyaha waaweyn waxay dhaawici karaan carruurta yar yar inta lagu jiro xilliga ciyaarta, badiyaa iyaga oo aan is ogayn.
Caruurteena yaryari way ku adkaan karaan xayawaanka, sidoo kale. Marka la eego dareenka difaaca ee Bully Kutta, kiddos-kaaga iyo baalkaaga afarta lugood leh waa inay ahaadaan marna wada jir aan loo ilaalin . Sidoo kale waa fikrad wanaagsan in la baro carruurtaada (iyo kuwa ay wada ciyaaraan) sida saxda ah ee xayawaanka loo ciyaaro looguna ciyaaro saaxiibadood canine.
Diyaar u noqo inaad waqti ku filan siiso tababarka Alangu Mastiff-kaaga, qaasatan markay tahay la dhaqanka bulshada iyo xaqiijinta booskaaga sida madaxdooda . Eeyadan ayaa kala ah xoog leh oo madax banaan . Waxay u baahan yihiin inay ogaadaan inaad adigu masuul ka tahay markasta . Ku guuldareysiga inaad xakameyso iyaga iyo hoostaada xirmadaada waxay noqon kartaa mid aad u khatar badan.
Bully Kuttas ma leedahay raab xun?
Sida Dibi Dibi gudaha Mareykanka, Mastiffada Hindida waxaa loo adeegsaday eeyo sharci darro ah oo ka dagaallama Pakistan. Sababtaas awgeed, waxay heleen a sumcad u lahaanshaha khatarta - dhiigyacab xitaa.
Taageerayaasha noocani waxay ku habboonaan karaan inay tilmaamaan in, 2009, Bully Kutta runti ayaa ka sareeya imtixaannada dabeecadda marka loo eego noocyada kale ee qoyska u roon, sida Gorgorrada iyo Collies .
Qiimeyntan, oo ay sameeyeen Bulshada Imtixaanka Dabeecadda Mareykanka , cabbiro dagaal, saaxiibtinimo, iyo dareen ilaalin ah oo ku jira meeraha.
Qiimeyntu waxay u ekeysiinaysaa socod ku dhex socodka baarkinka ama xaafadda, eeyahana waxaa lagu qiimeeyaa sida ay uga jawaabaan aragtida lama filaanka ah, maqalka, iyo dareenka taabashada ah, sida shisheeyaha ku soo dhowaanaya gacan-hayaha, maqalka dhawaqa rasaasta, iyo dhaqdhaqaaqyada lama filaanka ah.
Waxaa muhiim ah in la ogaado, hase yeeshe, in tan maya macnaheedu waa Bully Kuttas ma ahan mid dagaal badan ama ilaalin kara. Xaqiiqdii waa yihiin. Taabadalkeed, natiijooyinkan kari kara waxay muujinayaan in Sindh Mastiffs ay yihiin kuwo gorfeyn ah oo xajmiyo xaalado cusub ka hor inta aysan tallaabo qaadin si ay u difaacaan naftooda ama xirmadooda.
Si kastaba xaalku ha ahaadee, baaxada iyo xukunka Pakistan Mastiff waa inaan si fudud loo qaadan . Tani waa a noole awood badan taasi waxay waxyeello xoog leh u geysan kartaa dadka iyo duunyada kale haddii aan si habboon loo tababbarin loona maamulin.
Sida bakhaar kasta, Bully Kutta waxay kaa rabtaa caawimaad yar oo adiga ah si aad ugu fiicnaato.
In kasta oo lagu faano oo madaxbanaan yahay, milkiilayaasha tarankaani waa inay helaan waqti ay ku siiyaan kicinta jirka iyo maskaxda. Ha iloobin inaad ku ilaaliso saaxiibadaada afarta lug leh inaad u ekaato mid fiiqan, oo bixiya cunto nafaqo leh, iyo inaad ku ekaato qaab ahaan.
Jimicsigaaga Bully Kutta
Eeyaha waaweyn ayaa sumcad ku leh joogitaanka dhinaca caajiska ah, laakiin noocani gaarka ah wuxuu u baahan yahay meelo badan oo laga sii daayo tamarta jirka iyo maskaxda. Kuwani eeyaha shaqeeya madax adag samayn doonaa ugu fiican ee leh milkiileyaasha firfircoon ee aan dhib u qabin inay mas'uul ka noqdaan .
Qorsheyso inaad qarash gareyso ugu yaraan saacad maalin kasta socodka, orodka, ama la ciyaarista eygaaga. Waqtigan u isticmaal inaad xoojiso heerkaaga-hoggaamiye xirmo . Isku kalsoonow, oo hormuud u noqo inaad ka ilaaliso Bully Kuttaada inaad ka fikirto inay iyagu yihiin masuulka.
Haddii aad jimicsi ku sameysid fido-gaaga, hubi inaad ku sugan tahay meel aamin ah, oo ood ah. Eeyahaas noqon karaan fanaaniinta baxsadka ah. Sida ugu kulul ee ay noqon karaan, kani waa hal xayawaan oo aadan rabin inaad dabacdo.
Arooska Mastiff Hindi ah
Waxa noocani u baahan yahay waxqabad, waxay ka kooban tahay hagaajinta. Bully Kutta waa daadinta celceliska oo leh jaakad gaaban oo toosan. Uma baahnid inaad wax badan qabato si aad u ilaaliso dhogorta.
Cadayashada waa la samayn karaa toddobaadkii hal mar . Markaad siinaysid bucshiradaan kal-fadhiga spa, isticmaal a buraash adag-adag natiijooyinka ugu fiican.
Waxyaabaha kale ee wanaagsan ee lagu qurxiyo Sindh Mastiffs ayaa ah inay u muuqdaan inay naftooda nadiif ahaadaan. Haddii aad mar hore ka walwalsanayd sida aad u dhaqi lahayd eey aad u weyn, ma aha shaqo caynkaas ah maadaama aad kaliya ku qasbeyso inaad isaga maydho markii loo baahdo .
Inta badan, Eygaaga oo aad ku tirtirto maro qoyan oo aad dhagaha u nadiifiso oo aad u qalajiso toddobaad kasta ayaa kugu filnaan kara.
Cunnada Bully Kutta: Cunto ku habboon qof weyn
Waxaa lagu talinayaa in la quudiyo Mastiff-ka Pakistan kibibyo qalalan oo loo sameeyay noocyo waaweyn , oo ka kooban 40% protein, 30% khudaar, iyo 30% istaarjiin. Cunnadooda waa inay hodan ku tahay dufanka caafimaadka qaba , borotiin , iyo karbohaydraytyada .
Waxaad ikhtiyaar u leedahay inaad ku dhex qasto cuntada qasacadaysan, maraq, ama cuntada ceyriinka ah.
Qadarka la siinayo eeygaaga Xoogsheegashada, waxaad ogaan laheyd in qaarkood leeyihiin tiro koobab kala duwan ah oo ay ku quudiyaan tarankaan. Taasi waa sababta oo ah baakad kasta oo cunto ah waxay leedahay talo soo jeedin kala duwan. Waxaa ugufiican in diirada lasaaraa kaloriintooda maalinlaha ah ee loobaahanyahay si looga fogaado xad dhaafka ama aan loo siin xayawaankaaga xayawaan ku filan oo ay cunaan
Qaar waxay dhahaan waa in Pakistani Bully Kutta la quudiyo 4 ilaa 6 koob ee cunnada eyga maalintii, halka kuwa kale xitaa ay dhahaan 10 koob! Laakiin halkan waa wax fudud kalkuleytar xisaabiyaha si aad u ogaatid inta kaloori ee xayawaankaaga xayawaanka ahi u baahan yihiin.
Mastiff Bakistaan ​​guud ahaan waa nooc caafimaad qaba oo leh cimrigiisu yahay 8-10 sano . Weli, eeyaha waaweyn waxay ku jiraan khatar sare oo arrimaha caafimaadka qaarkood ah.
Arthritis, buro, iyo dhibaatooyinka wadnaha waxay ku badan yihiin hareeraha waaweyn. Nasiib wanaag, waxaa jira talaabooyin aad qaadi karto si aad u yareyso fursadaha ay Bully Kutta wax uga qabato arrimahan caafimaad:
Iska ilaali inaad isticmaasho quudiyaha kor u kacay , oo ku hay eygaaga cuntada iyo fijaannada biyaha ee dhulka ku yaal yaree khatarta bloat . Hubso inaad adigu jimicsi badan ha sameyn eygaaga, gaar ahaan markay da 'yar yihiin. U oggolow lafahaas iyo kala-goysyadu inay si buuxda u horumariyaan ka hor intaadan ku qaadin kursigaaga masaafo dheer.
Waxa kale oo muhiim ah in la ogaado in Bully Kutta uu yahay indho la’aan iyo xaaladaha maqaarka , sida xasaasiyadda ama infekshannada. Isha ku hay cuncunka iyo xoqitaanka kordhay, casaanka, finanka, ama timo luminta. Kuwaani dhammaantood waxay noqon karaan calaamadaha in wax ka khaldan yihiin maqaarka ilmahaaga.
Runtii ma yahay Bully Kutta taasi adag tahay in la helo?
Jawaabtu waa haa. Inkasta oo eeyahaani si fudud looga heli karo Hindiya iyo Baakistaan, haddana aad ayey ugu yar yihiin adduunka intiisa kale. Raadinta loogu talagalay soosaarayaasha Mareykanka kaliya ayaa soo baxday hal natiijo dhow Houston, TX.
Noocyada eyda aan caadiga ahayn way ka qaalisan karaan kuwa kale, waana hubaal taas kiiska Bully Kutta. Hindiya iyo Baakistaan, eyga Bully Kutta wuxuu noqon karaa mid hooseeya sida $ 300 . Laakiin taas oo ah US breeder oo aan soo sheegnay? Qiimaha carruurta yaryar ee laga helo qashinkooda 2019 ayaa ka bilaabmay $ 2000 .
Haddii aad ku nooshahay dal ay Bully Kutta ku adag tahay in laga helo, waxaad u baahan kartaa inaad hadda bilowdo keydinta. Filo inaad bixiso dinaar qurxoon si aad ugu wacdo mid ka mid ah eeydaan adiga kuu gaar ah.
Kuwa isweydiinaya meelaha ay ka mamnuucday Pakistan ama Mastiff sharci daro, waa kaliya Belarus in loo arko inay khatar yihiin. Waxay leeyihiin sharci taas eeyahaas waa inay si gaar ah u lahaadaan dadka jira 18 sano iyo wixii ka weyn.
Shuruudahooda ugu weyni waa inay ku hayaan noocyada noocaas ah inay ku ekaadaan dhismayaasha gurigooda. Sidoo kale waa in lagu ilaaliyaa qoorta iyo xadhig, iyo sidoo kale qashin. Haddii aad ku socon doontid canine-kan Belarus, had iyo jeer hubi inaad haysato shahaadadaada koorsooyinka tababarka ee ku saabsan daryeelka, dayactirka, iyo taranka foosha gaarka ah.
Milkiilayaasha eyda khabiirka ah ee ku raaxeysanaya tartan waxaa laga yaabaa inay si wanaagsan ula kulmaan kulankooda Bully Kutta. Xayawaanka ka soo jeeda Bariga labadaba waa laga baqayaa oo waa loo bogay xoog , awood , iyo dhaxal .
Tani ma aha eeygaaga qoyskaaga caadiga ah, ka dib oo dhan. Mastiff Hindi wuu ku barwaaqoobi doonaa guri leh qol fara badan oo lagu socodsiiyo oo aan lahayn xayawaano kale . Ku caday xirfadahaaga tababarka, oo ka bax dawooyinka tababarka. Shakhsiyaddaada Xoog-sheegashada ah ee Hindida ah ayaa hubaal ah inay cagahaaga ku haynayso.
Maxay yihiin fikradahaaga ku saabsan taranka cajiibka ah? Noo sheeg waxa aad u malaynayso faallooyinka!
Eyga yar ee adhijirka ah ee Jarmalku dhab ma yahay?
15 Eeyaha Lab Lab ah: Liiska Noocyada isku dhafan ee Labrador & Sawirro
rottweiler madow shaybaarka isku dhafka ah
aussie/xuduudaha collie isku darka
sida loo sameeyo sanduuqa cawska eey weyn
meeqa qaraha ayaa eey yeelan karaa
magacyada eey wiil wanaagsan ee pitbulls